Kwatinoshandisa epurasitiki zvikamu
Post nguva: 10-16-2020
Zvikamu zvepurasitiki zvinogadzirwa kuburikidza nekuumbwa kwekuumbwa nedzimwe nzira dzekugadzirisa, idzo saizi uye basa zvinosangana nezvinodiwa nevagadziri. Kupfuura 80% yezvikamu zvepurasitiki zvakaumbwa nejekiseni jekiseni, inova ndiyo nzira huru yekuwana chaiyo epurasitiki zvikamu. Jekiseni ...Verenga zvimwe »
10 mhando epurasitiki nebwe uye kushandiswa
Kuti tiite zvakanaka mukugadzira uye kugadzira zvigadzirwa zvepurasitiki, isu tinofanirwa kunzwisisa mhando uye mashandisiro epurasitiki. Plastiki rudzi rweakakwira mamorekuru macomputer (macrolecule) ayo akaumbiridzwa nekuwedzera polymerization kana polycondensation reaction ne monomer kunge mbishi zvinhu. Kune hama zhinji ...Verenga zvimwe »